July 18, 2021 – Kalfadhi
July 18, 2021 Hassan Istiila0 comment
Guddoomiyaha golaha wakiillada Jubaland Cabdi Maxamad Cabdiraxmaan, ayaa magacaabay guddiga doorashada xubnaha u tartamaya Aqalka Sare ee barlamaanka federaalka. Guddiga ayaa ka kooban sagaal xildhibaan oo labo kamid ah yihiin gabdho, waxaana ay ka shaqeyn doonaan sidii waqtigeeda ay ugu qabsoomi lahayd tartanka sideeda kursi ee Jubaland ku leedahay Aqalka Sare. Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga, ayaa ammaanay maamulka Jubbaland sida ay u bilaabeen howlaha doorashooyinka, isagoonna rajeeyay in maamuladda kale ay bilaabi doonaan. Dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan, ayaa maanta xarunta madaxtooyada Jubbaland…
Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal (GHDHF) Maxamed Xasan Cirro ayaa xalay kulan diiradda lagu saarayay sugidda iyo xaqiijinta amniga doorashooyinka la qaatay Guddiga Amniga Doorashooyinka heer Qaran. Kulanka oo uu shir-guddoominayay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan (Xijaar), ayaa muhiimadiisu ahaa sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashooyin xor iyo xalaal ah oo nabdoon iyo sidii loogu diyaar-garoobi lahaa sugidda amniga doorashooyinka dalka. Hassan Istiila Mogadishu, Somalia
Guddiga xalinta khilafaadka arrimaha doorashooyinka ee gobolka Gedo oo warbixin siiyay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland
Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan, ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay guddiga xalinta khilafaadka arrimaha doorashooyinka ee gobolka Gedo. Guddiga oo ah guddi heer-wasiirro oo ka kala socda dowladd-gobolleedyada dalka sida Puntland, Galmudug, Hirshabeele iyo Koonfur Galbeed ayaa madaxweyne ku-xigeenka warbixin ka siiyay xaaladda gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Garbahaarey oo ay ku sugnaayeen afartii casho ee la soo dhaafay, halkaasi oo ay ka wadeen xal u raadinta iyo dib-u-hishiisiin laga hirgaliyey gobolka. Dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka iyo guddiga xalinta khilafaadka ayaa la kulmay masuuliyiin ka tirsan labada…
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, ayaa manta xafiiskiisa kulamo goonni-goonni ah kula yeeshay danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Berlanga iyo ergayga gaarka ah ee Norway Heidi Elburgi Johansen. Ra’iisul wasaaraha iyo danjireyaasha ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ee uu hormuudka ka yahay Ra’iisul Wasaare Rooble. Doorashada aqalka sare oo u soo horreysa doorashooyinka dalka ayaa la filayaa in ay dhacaan 25-ka bishan.